Zimbabwe's power utility warns of 16-hour cuts as winter demand surges - The Source
Zimbabwe’s power utility warns of 16-hour cuts as winter demand surges
Posted on May 28, 2015 in Energy, Zimbabwe
BULAWAYO, May 28 (The Source) – Zimbabwe will experience power outages for up to 16 hours a day during the winter season after demand for electricity rose to 1, 800 megawatts (MW) against current output of 1,300MW, the power utility said on Thursday.
Zimbabwe’s seasonal peak power demand occurs during the winter months of June and July and the Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC) said it expects maximum demand to average 1,800MW.
As of Thursday, Zimbabwe Power Company (ZPC) was producing 1, 301MW, with the hydroelectric Kariba Power Station generating 662MW against an installed capacity of 750MW while Hwange thermal station was producing 546MW against installed capacity of 920MW.
Zimbabwe also imports power from Hydro Caborra Bassa of Mozambique but supply remains too low to meet demand.
Previous Post: Zimbabwe’s Dawn Properties FY revenue down 7pct on weak economy
Next Post: Corporate governance firm backs Mwana Africa board ahead of crunch EGM